အင်္ဂလိပ် – Myitkyina
Myitkyina > အင်္ဂလိပ်
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၏သက်တမ်းသည် ယခုအခါ (၆၁) နှစ်အတွင်းသို့ရောက်ရှိနေပါပြီ။ မြစ်ကြီးနားသက်ကြီး တက္ကသိုလ် ကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မြစ်ကြီးနားကောလိပ်ကို မြစ်ကြီးနား ဒေသကောလိပ် အဖြစ် ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြောင်းလဲသန်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ မြစ်ကြီးနားကောလိပ်ကို မြစ်ကြီးနား ဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင်တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ မြစ်ကြီးနား ဒီဂရီကောလိပ် ကို မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်အဖြစ် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဌာန၏ လက်ရှိ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးမှာ ဒေါက်တာနန်းအေးအေးသိန်း ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာဌာန၏ သင်ကြားရေးဆရာ/မ အင်အားမှာ နည်းပြ ၄ဦး၊ လက်ထောက်ကထိက ၁၂ ဦး၊ ကထိက ၁၅ ဦး၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ၁ဦး နှင့် ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ၁ဦး စုစုပေါင်း၃၃ ဦးရှိသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အနုစာပေများကို ပိုမိုလေးနက်စွာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများရရှိရန်။
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမတူညီသော ဓလေ့ထုံးစံ ယဉ်ကျေးမှုများကို ပိုမိုသိ၇ှိနားလည်စေရန်။
ကျောင်းသား/ သူများကို ၂၁ ရာစု အရည်အသွေးများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
လိုက်လျောညီထွေရှိသော သင်ကြား၊ သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရန်။
ကျောင်းသား/ သူ များ၏ အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များလေ့လာမှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်။
Phone : 09444028339
Email : nangayeayethein26@gmail.com
ဝိဇ္ဖာ(ဂုဏ်ထူးဘွဲ့) ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် (၁၉၉၂)
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် (၁၉၉၆)
ပါရဂူဘွဲ့၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် (၂၀၁၄)
(၁၉၉၃ မှ ၂၀၁၉)
၁ ဒေါက်တာနန်းအေးအေးသိန်း ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ဥက္ကဌ
၂ ဦးမနိုးကူးမား ကထိက အဖွဲ့ဝင်
၃ ဒေါ်မြတ်ထွေး ကထိက အဖွဲ့ဝင်
၄ ဦးအောင်သက်စိုး လက်ထောက်ကထိက အဖွဲ့ဝင်
၅ ဒေါ်ဝေနှင်းအိ လက်ထောက်ကထိက အဖွဲ့ဝင်
၆ ဦးလဇိန်ဘရန်နူးအောင် လက်ထောက်ကထိက အဖွဲ့ဝင်
၇ ဒေါ်စိန်းစိမ့်သူ လက်ထောက်ကထိက အဖွဲ့ဝင်
၈ မောင်ကျော်စိန် မဟာဝိဇ္ဇာပထမနှစ် အဖွဲ့ဝင်
၉ မောင်ဇော်လတ်အောင် မဟာအရည်အချင်းစစ် အဖွဲ့ဝင်
၁၀ မထက်ထက်လှိုင် တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း အဖွဲ့ဝင်
၁၁ မယမင်းသီရိအောင် ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း အဖွဲ့ဝင်
၁၂ မောင်ဇင်ကိုကို တတိယနှစ် အဖွဲ့ဝင်
၁၃ ဒေါက်တာမင်းသန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ အတွင်းရေးမှူး
၁ ဒေါက်တာနန်းအေးအေးသိန်း ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂ ဒေါက်တာမင်းသန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၃ ဦးမနိုးကူးမား ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၄ ဒေါ်သန်းသန်းနွဲ့ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၅ ဒေါ်မြတ်ထွေး ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၆ ဒေါ်အမ်ဆိုင်းဂျာ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၇ ဒေါ်ပရီလွမ်း ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၈ ဦးသောမတ်(စ်)မြင့်သိန်း ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၉ ဒေါ်စန်းစန်းတင် ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၀ ဒေါ်ခင်ခင်အေး ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၁ ဒေါ်နီလာဝင်း ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၂ ဒေါ်ဂျာကိုင် ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၃ ဦးငွါးဟော်ဝမ်း ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၄ ဒေါ်နန်းစံခမ်း ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၅ ဒေါ်အမ်ခါးနောင် ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၆ ဒေါ်ခင်လေးမူ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၇ ဒေါ်စုစုကြည် ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၈ ဒေါ်ဝေနှင်းအိ လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၁၉ ဒေါ်စုနွေး လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၀ ဒေါ်ထက်ထက်လင်း လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၁ ဒေါ်နိုင်လင်းလင်းချစ် လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၂ ဒေါ်စိုးဒါလီဝေ လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၃ ဦးအောင်ဇော်ထူး လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၄ ဦးအောင်သက်စိုး လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၅ ဒေါ်ချမ်းမြေ့စိုး လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၆ ဒေါ်စိမ်းစိမ့်သူ လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၇ ဒေါ်အိအိမြင့် လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၈ ဦးလဇိန်ဘရန်နူးအောင် လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၂၉ ဦးဘောမ်ခေါ လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၃၀ ဒေါ်မရန်ဂျာဆိုင်းမိုင် နည်းပြ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၃၁ ဒေါ်ဝင်းသိင်္ဂီအောင် နည်းပြ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၃၂ ဒေါ်ဇာနည်မာ နည်းပြ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
၃၃ ဒေါ်စုစုနိုင် နည်းပြ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်အနုစာပေ
ဒေါက်တာမင်းသန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ View Profile
ဦးမနိူးကူးမား (ခ) ဦးမနော(ဂျ်)ကူးမား ကထိက View Profile
ဒေါ်သန်းသန်းနွဲ့ ကထိက View Profile
ဒေါ်မြတ်ထွေး ကထိက View Profile
ဒေါ်အမ်ဆိုင်းဂျာ ကထိက View Profile
ဒေါ်ပရီလွမ်း ကထိက View Profile
ဦးသောမတ်(စ်)မြင့်သိန်း ကထိက View Profile
ဒေါ်စန်းစန်းတင် ကထိက View Profile
ဒေါ်ခင်ခင်အေး ကထိက View Profile
ဒေါ်နီလာဝင်း ကထိက View Profile
ဒေါ်ဂျာကိုင် ကထိက View Profile
ဦးငွါးဟော်ဝမ်း ကထိက View Profile
ဒေါ်နန်းစံခမ်း ကထိက View Profile
ဒေါ်အမ်ခါးနောင် ကထိက View Profile
ဒေါ်ခင်လေးမူ ကထိက View Profile
ဒေါ်စုစုကြည် ကထိက View Profile
ဒေါ်ဝေနှင်းအိ လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဒေါ်စုနွေး လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဒေါ်ထက်ထက်လင်း လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဒေါ်နိုင်လင်းလင်းချစ် လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဒေါ်စိုးဒါလီဝေ လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဦးအောင်ဇော်ထူး လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဦးအောင်သက်စိုး လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဒေါ်ချမ်းမြေ့စိုး လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဒေါ်စိမ်းစိမ့်သူ လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဒေါ်အိအိမြင့် လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဦးလဇိန်ဘရန်နူးအောင် လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဦးဘောမ်ခေါ လက်ထောက်ကထိက View Profile
ဒေါ်မရန်ဂျာဆိုင်းမိုင် နည်းပြ View Profile
ဒေါ်ဝင်းသိင်္ဂီအောင် နည်းပြ View Profile
‌ဒေါ်ဇာနည်မာ နည်းပြ View Profile
‌ဒေါ်စုစုနိုင် နည်းပြ View Profile
အမည် – ‌ဒေါ်စုစုနိုင်
ရာထူး – နည်းပြ
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဖာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)
– မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်(၂၀၁၅)
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၇၈၅၆၉၃၇၅၀
အီးမေးလ် – ssunaing6@gmail.com
အမည် – ‌ဒေါ်ဇာနည်မာ
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဖာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)
မဟာအရည်အချင်း စစ်သင်တန်းတက်ရန်အဆင့်မီ မုံရွာတက္ကသိုလ် (၂၀ဝ၆)
– မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)မုံရွာတက္ကသိုလ်(၂၀၁၀)
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၄၄၄၃၇၂၈၀ဝ
အီးမေး – zarnimarzarnimar@gmail.com
အမည် – ဒေါ်ဝင်းသိင်္ဂီအောင်
– မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်(၂၀၁၄)
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၂၅၉၁၃၇၃၈၁
အီးမေး – einge272@gmail.com
အမည် – ဒေါ်မရန်ဂျာဆိုင်းမိုင်
– အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးဒီပလိုမာ မန္တလေးတက္ကသိုလ် (၂၀၁၃)
သင်ကြားရေ းအတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၇၉၃၈၇၁၀ဝ၃
အီးမေး – j.sengm@gmail.com
အမည် – ဦးဘောမ်ခေါ
ရာထူး – လ/ထကထိက
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) (၂၀၁၀)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) (၂၀၁၄)
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း – Common Mistakes in the use of Grammatical Collocations made by First Year Mathematics Students of the Banmaw University, Banmaw University Research Journal, Vol.8, 2018.
လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု – ၄ နှစ်ကျော် စာသင်ကြားမှုသည် အတွေ့အကြုံရှိခြင်း
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၇၈၀၂၉၀ဝ၂၄
အီးမေး – bawmhkaw09@gmail.com
အမည် – ဦးလဇိန်ဘရန်နူးအောင်
ရာထူး – လက်ထောက်ကထိက
– မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – (4) နှစ်၊ (၆) လ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၄၄၀ဝ၀၄၇၈၁
အီးမေး – lazingbrangnuawng@gmail.com
အမည် – ဒေါ်အိအိမြင့်
ပညာအရည်အချင်း -ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ ၂၀ဝ၉
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၁၂
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေး (၄)နှစ်
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၂၅၇၆၈၄၆၁၁
အီးမေး – eieimyint731@gmail.com
အမည် – ဒေါ်စိမ်းစိမ့်သူ
လက်ရှိရာထူး – လက်ထောက်ကထိက
ပညာရေးနှင့် ထူးချွန်းမှု – ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ (၂၀၁၀)
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ (၂၀၁၃)
လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ – သင်ကြားရေးလုပ်သက် (၄)နှစ်
အင်္ဂလိပ်စာဌာန၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် (၂၀၁၅ မှ ယနေ့ထိ)
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၄၀ဝ၀၂၄၅၉၉
အီးမေး – seintthu107@gmail.com
အမည် – ဒေါ်ချမ်းမြေ့စိုး
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ (၂၀ဝ၉)ခုနှစ်၊
မဟာဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့၊ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၆)နှစ်(၆)လ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉-၄၀ဝ၀၁၃၀၇၈
အီးမေး – chanmyaesoe88@gmail.com
အမည် – ဦးအောင်သက်စိုး
– နိုင်ငံတကာသုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြား ခြင်း သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံ (၂၀၁၆)
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၇)နှစ်ရှိ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉-၇၈၇၅၈၉၂၆၀
အီးမေး – aungthetsoemkn30@gmail.com
အမည် – ဦးအောင်ဇော်ထူး
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉-၇၈၇၉၄၅၈၂၀
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ (၂၀၁၀) ခုနှစ်၊
မဟာဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့၊ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ (၂၀၁၃) ခုနှစ်၊
မဟာသုတေသနဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ (၂၀၁၄) ခုနှစ်၊
ဒီပလိုမာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မန္တလေးနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်၊
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေး (၇)နှစ်
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၄၃၁၂၄၄၂၉
အီးမေး – soedarliwai@gmail.com
အမည် – ဒေါ်နိုင်လင်းလင်းချစ်
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ (၂၀ဝ၄)ခုနှစ်၊
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၁၀)နှစ်ရှိ၊
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၄၀ဝ၀၂၁၇၁၁
အီးမေး – Lynn19212@gmail.com
အမည် – ဒေါ်ထက်ထက်လင်း
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေး (၁၀)နှစ်
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၄၄၀ဝ၀၂၄၀ဝ
အီးမေး – email-htetLin@gmail.com
အမည် – ဒေါ်စုနွေး
အီးမေး – sunway15.mkn@gmail.com
အမည် – ဒေါ်ဝေနှင်းအိ
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ ( ၁၉ ) နှစ်ရှိ
– သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)
– ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) (ရန်ကုန်)
– သူနာပြုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)
– ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉-၄၄၀၉၀၄၉၇
အီးမေး – ladywaihninei@gmail.com
အမည် – ဒေါ်စုစုကြည်
ရာထူး – ကထိက
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၁၅)နှစ်ရှိ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉-၇၈၀၇၇၆၉၇၃
အီးမေး – susukyi1972@gmail.com
အမည် – ဒေါ်ခင်လေးမူ
လက်ရှိရာထူး – ကထိက
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)-၁၉၉၅၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)-၂၀ဝ၀၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်
လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ – မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ၊ ၁၇နှစ်၊ ၈လ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၄၃၁၁၆၉၇၉
အီးမေး – Khinlaymu51@gmail.com
အမည် – ဒေါ်အမ်ခါးနောင်
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ (၁၉၉၈)ခုနှစ်၊
မဟာဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့၊ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၁၇)နှစ် (၇)လ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉-၂၄၀၂၆၂၇
အီးမေး – mhkanau@gmail.com
အမည် – ဒေါ်နန်းစံခမ်း
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၄၃၁၀၉၆၄၈
အီးမေး – elodiesankham007@gmail.com
အမည် – ဦးငွါးဟော်ဝမ်း
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – (၁၉)နှစ်
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၄၄၂၄၃၁၆၂၈
အီးမေး – ngwahawwang12@gmail.com
အမည် – ဒေါ်ဂျာကိုင်
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) – ၁၉၉၇၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) – ၂၀ဝ၃၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်
လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ – မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်တို့တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ၊ ၁၇နှစ်၊ ၈လ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၂၅၉၀၁၀၁၀၈
အီးမေး – nkoijakai.ut69@gmail.com
အမည် – ဒေါ်နီလာဝင်း
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၂၁)နှစ်ရှိ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၂၄၀၁၇၄၆
အီးမေး – nilarwin1746@gmail.com
အမည် – ဒေါ်ခင်ခင်အေး
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၂၅၉၀၄၃၇၇၅
အီးမေး – dawkhinkhinaye@gmail.com
အမည် – ဒေါ်စန်းစန်းတင်
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဖာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) (၁၉၉၄) မန္တလေးတက္ကသိုလ်
– မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) (၁၉၉၉) မန္တလေးတက္ကသိုလ်
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၂၂)နှစ်ရှိ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၂၁၁၀၉၅၇
အီးမေး – leostar@gmail.com
အမည် – ဦးသောမတ်(စ်)မြင့်သိန်း
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – (၂၂)နှစ်
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၉၅၀၂၄၄၅၀၃
အီးမေး – thomasmt.eng6768@gmail.com
အမည် – ဒေါ်ပရီလွမ်း
ပညာရေးနှင့် ထူးချွန်းမှု – ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ (၁၉၉၄)
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ (၁၉၉၈)
ဝါရင့်ပါရဂူကျောင်းသူ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ (၂၀၁၆)
လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ – သင်ကြားရေးလုပ်သက် (၂၂)နှစ်
အင်္ဂလိပ်စာဌာန၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် (၁၉၉၈ မှ ယနေ့ ထိ)
စာတမ်းထုတ်ဝေမှု – (1) “ Conversational styles of female characters in Jane Austen’s Novel:
Intersection of Language, Gender and Social Identities” [on going]
(2) “ Exploring female conversational styles in Pride and Prejudice through Language, Sender and social identities ’’
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉၂၅၆၀၇၇၉၁၁
အီးမေး – lasiprilum@gmail.com
အမည် – ဒေါ်အမ်ဆိုင်းဂျာ
ပညာအရည်အချင်း – ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)-၁၉၉၅၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်
အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးဒီပလိုမာဘွဲ့- ၁၉၉၇၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)-၂၀ဝ၂၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်
ပြုစုဆဲကျမ်းခေါင်း စဉ် – Manifestation of Bloom’s Revised Taxonomy in the English
Coursebooks Prescribed for Tertiary Level Students
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း – 2018- Exploring Cognitive
Processes of Bloom’s Revised
Taxonomy in the English Textbook’s Questions and Activities,
Myitkyina University Research Journal, Vol.9 No.1, 2018.
လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ – မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ၊ ၂၁နှစ်၊ ၉လ
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉၄၃၁၁၈၆၄၆
အီးမေး – senggja@gmail.com
အမည် – ဒေါ်မြတ်ထွေး
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဖာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) (၁၉၈၇) မန္တလေးတက္ကသိုလ်
– အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးဒီပလိုမာ (၁၉၉၇) မန္တလေးတက္ကသိုလ်
– မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)(၂၀ဝ၁)မန္တလေးတက္ကသိုလ်
– မဟာသုတေသနဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) (၂၀ဝ၃) မန္တလေးတက္ကသိုလ်
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ (၃၀)နှစ်ရှိ
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉၇၈၀၂၉၁၁၉၈
အီးမေး – dmyathtwe28@gmail.com
အမည် – ဒေါ်သန်းသန်းနွဲ့
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ – သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ ( ၂၁ )နှစ်ရှိ
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၂၀၅၇၂၂၀
ဦးမနိူးကူးမား (ခ) ဦးမနော(ဂျ်)ကူးမား
အမည် – ဦးမနိူးကူးမား (ခ) ဦးမနော(ဂျ်)ကူးမား
ပညာအရည်အချင်း – ဘီအေ(အင်္ဂလိပ်စာ)၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၁၉၈၅
ဘီအေ(ဂုဏ်ထူးတန်း)၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၁၉၈၆
မဟာဝိဇ္ဇာ(အထူးအောင်)၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ၁၉၉၀
သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေး (၃၃)နှစ်
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၂၄၀ဝ၃၉၁
အီးမေး – manojkumar11963@gmail.com
အမည် – ဒေါက်တာမင်းသန်း
ရာထူး – တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဖာ(ဂုဏ်ထူးတန်း)ဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)
– ပါရဂူဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ)
အတွေ့အကြုံ – (၂၂)နှစ်ရှိ
– တပ်မတော်ကွန်ပျူတာနှင့် နည်းပညာသိပ္ပံ (ဟိုပုံး)
ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉၇၉၉၀၇၃၉၅၉
အီးမေး – minthaneng2015@gmail.com
COMMON MISTAKES IN THE USE OF COLLOCATIONS BY FIRST YEAR MATHEMATICS STUDENTS OF THE BANMAW UNIVERSITY Bawm Hkaw, Daw Su Kyi Lin, Daw Seng Doi, Daw Pan War War Lynn,
Daw Ja Seng Hpra, Daw Khin Nyein Wae
The present study is to explore collocation mistakes of first year students specialized in Mathematics in Banmaw University in 2015-2016 Academic year.
Common collocational mistakes were collected from their written papers and were identified according to Benson, Benson and Ilson’s (1986) collocations model. Various kinds of collocational mistakes are found, but grammatical collocations (Adj + Prep, N + Prep, V + Prep, Prep + N) were mainly investigated in this study. The results, in some extend, reveal that mistakes on grammatical collocations are because of unawareness of collocation and students’ first language interference. It is aimed to get better teaching techniques for collocational practices and to reflect how previous teaching has worked in the language classroom.
Banmaw University Research Journal, Volume.8, 2018
Exploring Cognitive Processes of Bloom's Revised Taxonomy in the English
Textbook's Question and Activities
M SengJa The purpose of the researcher is to evaluate thinking levels of the English textbook prescribed for tertiary level. This researcher aims at exploring the cognitive processes of Bloom's revised taxonomy (2001) are used as theoretical framework.The result show that the remembering level, the simplest cognitive process, is profoundly main fest in the instructional question and activities of the first semester textbook, The finding if the analysis indicate that the instructional questions and activities in the textbook fail to encourage with the tertiary level learners' needs. This study has some implications for educational decision-makers, curriculum developers, syllable designers, and language teachers to evaluate and modify the educational materials in suchaway to achieve higher level thinking skills of learning objectives. Moreover, this study has enlightened for further research in field of textbook evaluation in each and every level of Myanmar education process.
Bloom's Revised Taxonomy (2001), Cognitive Process
Anxiety and Speaking English asaForeign Language
among Male and Female MBA Students
Ni Ni Hlaing, Min Than This research tries to explore the learning anxiety of speaking English and the causes of the learning anxiety. It also examined the reactions reported by 87 students studying for Master of Business Administration (MBA) at the University of Mandalay.To be able to compare the causes and learning anxiety which affect male students and female students, data were collected from almost the same number of male students (44) and female students (43). Since the MBA students are not the learners at the beginning stage of foreign language learning, they are believed to be at higher levels of English proficiency. The experienced researchers have proved that anxiety about speakingaforeign language is mainly apparent at lower levels of language competence. Consequently, this research also tries to find out whether anxiety is also relevant at higher levels of English proficiency. The questionnaire used for the data collection consists of 26 anxiety statements. Ti is divided into two parts. The first part (No. 1 to No. 5) is used to find out their anxiety concerning speaking. The findings indicate that lack of speaking practice is the major cause of anxiety and communication anxiety is the most frequent one that influences the MBA students. In addition, the female students are more emotional than male students while speaking Enlgish.
An Analysis of the Project: Burma Bamboo Bike Partnership,
Developing in Kachin State
Nang Aye Aye Thein This research focuses on Burma Bamboo Bike Partnership, the project developing in these days in Kachin State. The aim of this research is to analyse the contribution of Bamboo Bike Project in Kachin State and if this project is sustainable development for the community, following Kapple (2017)’s6ways to measure small business success.In analyzing this project, the methodology in fixing the bikes through bamboo which is the native product, and the goal and vision of their project will become impressive. The findings of this research have raised the questions: will the project support the jobless people in Northern state and will it make the local people to be good leaders of their community. Nevertheless, it is hoped that the project really gives the mechanical education to local people of Northern Myanmar.
Attitude of Teachers and Students on Teaching and Learning Literature Nang Aye Aye Thein This research focuses on the effectiveness of teaching and learning literature in English as Foreign Language (EFL) classrooms. The aim of this research is to investigate the attitude of teachers and students on teaching and learning literature in classrooms.In doing this, the definitions of Trochim (2006), Timpany (2015), and PMGroup Worldwide Ltd (2016) have been applied and dichotomous questionnaires used in the survey are applied as the method which is mentioned in “Research in English Language Teaching” (2008). This research is conducted at both undergraduate and postgraduate levels of English specialization students and some teachers at English Department in Myitkyina University in second semester, 2016 academic year. The findings of this research highlight the importance of the role of teaching literature in classrooms, serve as an answer to the question “whether teaching literature is effective or not” for language learners and point out the fact that the efforts of language teachers, and the students’ attention on literature are crucial in teaching and learning literature in classrooms. This research is highly expected to make contributions to teachers who are handling teaching literature and also to students who are engaging in learning literature. attitude, literature, dichotomous, questionnaire
Violation of the Maxims inaClassical Play Nang Aye Aye Thein This research, based onacritical understanding of literature, investigates the violation of maxims in the play “Pygmalion” by George Bernard Shaw who became well known asacritic of art, music, and literature in 1884. “Pygmalion” is Shaw’s classical play in which he probes important questions about social class, human behaviour, and relations between the genders, and the 5-Act play.“Pygmalion” is alsoacomedy about phonetics expert who attempts to makealady out of an uneducated Cockney flower girl. In this research, Blakemore (1992)’s statement of utterance, and Grice (1975)’s Cooperative Principle known as conversational maxims _ maxim of Quantity, maxim of Quality, maxim of Relation and maxim of Manner, cited by Thomas (1995) are applied in investigation. The research found that people in the play convey meanings in interactions, violating conversational maxims. Based on the findings, it is concluded that learning violation of the maxims will be very useful in helping learners of English asaforeign language develop both communicative competence as well as literary analysis.
Common Loanwords in English Nang Aye Aye Thein1 This research focuses on the common loanwords in English. The aim of this research is to investigate how much influence of foreign languages on English and which language is the most dominant of all languages that influence on English. In doing this, the definitions of Kemmer(2017) from Rice University, and the articles of Kroulek (2014), Liam (2016), anonymous (2016) fromwww.fluentu.com, and Ryan Sitzman (2019)are used as materials in the survey. Therefore, this isakind of report research and the findings of this research highlight the dominance of foreign languages on English and which language is the most dominant of all. This research is also highly expected to make contributions to both teachers and learners who are engaging in learning and teaching English as EFL. loanwords
1 Ma Lat Mai Awng
2 M.A -Eng-1 The Use of Indirect Speech Acts for Politeness in the Selected Short Story "Blind Man's Holiday" by O Henry U Ngwa Haw Wang
2 Ma Hkaw Myaw
2 M.A-Eng-2 Intercultural Communication: Culture Dimensions between Myanmar and Westerners Daw Pri Lum
3 Ma Roi Nan
2 M.A-Eng-3 An Investigation of Conversational Maxims of Main Characters in the Movie "The Great Gatsby" Daw Nang San Hkam
4 Ma Shwe Yi Win Lae
2 M.A-Eng-4 An analysis of Sentence Types in Some Letters from "Letters From A Father To His Daughter" by Jawaharlal Nehru Daw San San Tin
5 Ma Khin Wint Thu
2 M.A-Eng-5 Hedging in Conversations ofaMyanmar Film "Deception" Daw Ja Kai
6.. Ma Pan Ei Phyu
2 M.A-Eng-6 An Analysis of One of the Main Characters' Speech Acts Classification in the Movie "Forrest Gump" Daw Nilar Win
7 Mg Khin Oo
2 M.A-Eng-7 A Comparative Study of Gender Representations: Socially marked Gender Items in Old and New Version of Grade6EFL Textbooks in Myanmar Daw M Seng Ja
8 Ma Jaw Seng Din Awng
2 M.A-Eng-8 Relationship between Lexical Patterning and the Aesthetic Effect in Some Poems by Emily Dickinson Dr Nang Aye Aye Thein
9 Ma Chaw Su Hlaing Win
2 M.A-Eng-9 An Investigation of Common Spelling Errors Made by First Year English Specialization Students at Myitkyina University U Manoe Kumar
10 Ma Nang Doi
2 M.A-Eng-10 Syntactic Analysis of Airline Slogans in Southeast Asia Daw Myat Htwe
11 Ma Seng Lu Lu Awng
2 M.A-Eng-11 A Comparative Analysis of Speech Styles of Michelle Obama and Melania Trump U Thomas Myint Thein
12 Ma Tin May
2 M.A-Eng-12 Request Strategies Used in the Novel, "The Sun Also Rises" by Ernest Hemingway Daw Khin Khin Aye
13 Ma Jangmaw Seng Lu Pan
2 M.A -Eng-13 A Study of Learning Style Preferences of Grade (4) and (5) Students at No. (1) and (9) Basic Education high School in Myitkyina Dr Min Than
14 Ma Lu Lu San Ra
2 M.A-Eng-14 An Analysis of Figurative Language in the Short Story "Selfish Giant' by Oscar Wilde Daw Khin Lay Mu
15 Ma Nyein Wai Tun
2 M.A-Eng-15 An Analysis of Binary Oppositions in the Novel "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift Daw Than Than Nwet
ပထမနှစ် ၆၈ ၁၂၂ ၁၈၀
ဒုတိယနှစ် ၄၆ ၉၁ ၁၃၇
တတိယနှစ် ၄၆ ၇၇ ၁၂၃
စတုတ္ထနှစ် ၂၅ ၉၈ ၁၂၃
ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၂ ၇ ၉
ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း - ၂ ၂
တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း - ၁၅ ၁၅
မဟာအရည်အချင်းစစ် ၃ ၄ ၇
မဟာဝိဇ္ဇာပထမနှစ် ၆ ၂၁ ၂၇
မဟာဝိဇ္ဇာဒုတိယနှစ် ၁ ၁၄ ၁၅
စုစုပေါင်း ၁၉၇ ၄၄၁ ၆၃၈
ပထမနှစ် ၁၇၃ ၂၄၀ ၄၁၃
ဒုတိယနှစ် ၁၇၅ ၂၉၁ ၄၆၆
တတိယနှစ် ၁၇၄ ၃၃၃ ၅၀၇
စတုတ္ထနှစ် ၁၈၅ ၃၂၅ ၅၁၀
စုစုပေါင်း ၇၀၇ ၁၁၈၉ ၁၈၉၆
Time Table (Sem I )
Time Table (Sem II )
မ ၁၀ဝ၁ မြန်မာစာ32 2
Eng 1101 English Literature-143 2
Eng 1102 English Literature-2432
Eng 1103 Communicative Skills-143 2
မ ၁၀ဝ၁	 မြန်မာစာ
Eng 1101 English Literature – 1 (19th & 20th Century Prose & 20th Century Short Stories)
Eng 1102 English Literature –2(20th Century Poetry & Drama)
Eng 1103 Communicative Skills – 1
Elective Courses (for English Specialization)
Psy	1001 Public Relations
Phil	1001	 Logic in Practice – 1
OS	1001	 Fundamentals of the Pali Language
IR	1002	 Introduction to International Relations – 1
Hist	1003	 World history to 1500 – 1
AM	1001	 Aspects of Myanmar
Points Lecture Tutorial
မ ၁၀ဝ၁	 မြန်မာစာ32 2
Eng 1104 English Literature-343 2
Eng 1105 English Literature-443 2
Eng 1106 Communicative Skills-243 2
မ ၁၀ဝ၂ မြန်မာစာ
Eng 1104	 English Literature –3(19th & 20th Century Prose & 20th Century Short Stories)
Eng 1105	 English Literature –4(20th Century Poetry & Drama)
Eng 1106	 Communicative Skills – 2
OS 1007	 Pali Literature
Phil 1003	 Logic in Practice – 2
Psy 1004	 Understanding Human Interaction
IR 1005	 Introduction to International Relations – 2
Hist 1006	 World History 1500 – 2
AM 1002	 Aspects of Myanmar
Eng 2101 English Literature-543 2
Eng 2102 English Literature-643 2
Eng 2103 English Language Studies-143 2
Eng 2104 Communicative Skills-343 2
မ ၂၀ဝ၁	 မြန်မာစာ
Eng 2101 English Literature –5(16th to 20th Century Prose & 19th & 20th Century Short Stories)
Eng 2102 English Literature –6(19th & 20th Century Poetry & Drama)
Phil 2001	 History of Western Intellectual Development – 1
IR 2001	 Elements of Political Institutions – 1
OS 2001	 Pali Language
OS 2003	 Pali Literature (Prose)
Eng 2003	 Developing Communicative Skills – 1
Eng 2105 English Literature-743 2
Eng 2106 English Literature-843 2
Eng 2107 English Language Studies-243 2
Eng 2108 Communicative Skills-443 2
မ ၂၀ဝ၂	 မြန်မာစာ
Eng 2105 English Literature –7(16th to 20th Century Prose & 19th & 20th Century Short Stories)
Eng 2106 English Literature – 8 (19th & 20th Century Poetry & Drama)
Eng 2107 English Language Studies –2(Introduction to General Linguistics & Phonetics)
မ ၃၀၀၁ မြန်မာစာ32 2
Eng 3101 English Literature-943 2
Eng 3102 English Literature-1043 2
Eng 3103 English Language Studies-343 2
Eng 3104 Translation and Interpretation-143 2
မ ၃၀၀၁ မြန်မာစာ
Eng 3101 English Literature –9(19th & 20th Century Short Stories & The Novel)
Eng 3102 English Literature – 10 (18th & 19th Century Poetry & Drama)
Eng 3104 Translation & Interpretation –1
Eng 3105	 Communicative Skills – 5
Eng 3106	 Business English – 1
Eng 3107	 Introducing ELT Methodology – 1
Eng 3003 Developing Communicative Skills – ၃
မ ၃၀ဝ၁ မြန်မာစာ32 2
Eng 3108 English Literature-1143 2
Eng 3109 English Literatur-1243 2
Eng 3110 English Language Studies-443 2
Eng 3111 Translation and Interpretation-243 2
မ ၃၀ဝ၂ မြန်မာစာ
Eng 3108 English Literature – 11 (19th & 20th Century Short Stories & The Novel)
Eng 3109 English Literature – 12 (18th & 19th Century Poetry & Drama)
Eng 3110 English Language Studies –4(Syntactic Theory – 1 )
Eng 3111 Translation & Interpretation –2
မ ၄၀ဝ၂ မြန်မာစာ32 2
Eng 4101 Research Paper Writing43 2
Eng 4102 English Literature-343 2
Eng 4103 English Language Studies-543 2
Eng 4104 Translation and Interpretation-343 2
မ ၄၀ဝ၂ မြန်မာစာ
Eng 4102 English Literature – 13 (19th Century Short Stories & The Novel)
Eng 4103 English Language Studies –5(Syntactic Theory –2& Introduction to Semantics)
Eng 4104 Translation & Interpretation – 3
Eng 4109 Public Speaking & Presentation Skills43 2
Eng 4110 English Literature ? 1443 2
Eng 4111 English Language Studies ?6432
Eng 4112 Translation & Interpretation ?4432
Eng 4109 Public Speaking & Presentation Skills
Eng 4110 English Literature – 14 (17th & 18th Century Poetry & Drama)
Eng 4111 English Language Studies –6(Syntactic Theory –3& Introduction to Discourse Analysis)
Eng 4112 Translation & Interpretation – 4
Eng 4113 ASEAN Literature in English –2
FIRST YEAR HONOURS(BA)
Eng 3201 English Literature-943 2
Eng 3202 English Literature-1043 2
Eng 3203 English Language Studies-343 2
Eng 3204 Translation and Interpretation-143 2
မ ၃၀ဝ၁ မြန်မာစာ
Eng 3201 English Literature –9(19th & 20th Century Short Stories & The Novel)
Eng 3202 English Literature – 10 (18th & 19th Century Poetry & Drama)
Eng 3203 English Language Studies –3(Morphology)
Eng 3204 Translation & Interpretation – 1
Eng 3205 Communicative Skills – 5
Eng 3206 Business English – 1
Eng 3207 Introducing ELT Methodology – 1
မ ၃၀၀၂ မြန်မာစာ32 2
Eng 3208 English Literature-1143 2
Eng 3209 English Literature-1243 2
Eng 3210 English Language Studies-443 2
Eng 3211 Translation and Interpretation-243 2
မ ၃၀၀၂ မြန်မာစာ
Eng 3208 English Literature – 11 (19th & 20th Century Short Stories & The Novel)
Eng 3209 English Literature – 12 (18th & 19th Century Poetry & Drama)
Eng 3210 English Language Studies –4(Syntactic Theory – 1 )
Eng 3211 Translation & Interpretation – 2
Eng 3212 Communicative Skills – 6
Eng 3213 Business English – 2
Eng 3214 Introducing ELT Methodology – 2
SECOND YEAR HONOURS(BA)
မ ၄၀၀၁ မြန်မာစာ32 2
Eng 4201 Research Paper Writing43 2
Eng 4202 English Literature-1343 2
Eng 4203 English Language Studies-543 2
Eng 4204 Translation and Interpretation-343 2
Eng 4201 Research Paper Writing
Eng 4202 English Literature – 13 (19th Century Short Stories & The Novel)
Eng 4203 English Language Studies –5(Syntactic Theory –2& Introduction to Semantics)
Eng 4204 Translation & Interpretation – 3
Eng 4205 ASEAN Literature in English – 1
Eng 4206 Communicative Skills – 7
Eng 4207 Business English – 3
Eng 4208 English Language Teaching – 1
မ ၄၀၀၂ မြန်မာစာ32 2
Eng 4110 English Literature-1443 2
Eng 4111 English Language Studies-643 2
Eng 4112 Translation & Interpretation -443 2
မ ၄၀၀၂ မြန်မာစာ
Eng 4209 Public Speaking & Presentation Skills
Eng 4210 English Literature – 14 (17th & 18th Century Poetry & Drama)
Eng 4211 English Language Studies –6(Syntactic Theory –3& Introduction to Discourse Analysis)
Eng 4212 Translation & Interpretation – 4
Eng 4213 ASEAN Literature in English – 2
Eng 4214 Communicative Skills – 8
Eng 4215 Business English – 4
Eng 4216 English Language Teaching – 2
THIRD YEAR HONOURS(BA)
Eng 5201 English Literature-1543 2
Eng 5202 Intercultural Communication-143 2
Eng 5203 English Language Studies-743 2
Eng 5204 Effective Negotiating & Effective Meetings43 2
Eng 5202 Intercultural Communication – 1
Eng 5203 English Language Studies –7(Introduction to Sociolinguistics & Psycholinguistics)
Eng 5204 Effective Negotiating & Effective Meetings
Eng 5208 English for Hospitality & Tourism – 1
Eng 5209 English Literature-1643 2
Eng 5210 Intercultural Communication-243 2
Eng 5211 English Language Studies-843 2
Eng 5212 English in the Media43 2
Eng 5211 English Language Studies – 8 (Introduction to Stylistics & Pragmatics)
Eng 5216 English for Hospitality & Tourism – 2
First Year (MA)
E 611 Grammar & Syntax42
E 612 Sociolinguistics & Discourse Analysis42
E 613 Thematic Studies - I42
E 614 Methodology42
E 621 Research Methodology42
E 622 Error Analysis & Psycholinguistics42
E 623 Academic Writing42
E 624 Stylistics & Semantics42
Second Year (MA)
E 631 Developing Language & Literary Skills42
E 632 Syllabus Design42
E 633 Thematic Studies - II42
E 634 Assessment42